ကြူ ကြူ Q | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ကြူ ကြူ Q
ကြူ ကြူ Q
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Sep 15, 2014 in Aha! Jokes, Satire | 20 comments
ဗျားဒို့ဂို ဒီနေ့ အနော်သိတဲ့ Qအကြောင်း ဆွေးနွေးချဉ်သဗျ။ အများသိ IQ, EQ တို့တော့ ဟုတ်ဝူး၊ အဲဒါဒွေ ပြောဖို့လဲ ညံအမှီဗူး.. ဆိုဒေါ့ ကိုယ်သိတာပဲ ကိုယ်ပြောမဲ…။ လက်တွေ့ အသုံးသိပ်ဝင်တဲ့ ကြူလေးကြူ ရှိသဗြ၊ ပထမဆုံးဃ…
ရွှီးကြူ.. ဖြီးကြူလို့လဲ ခေါ်တယ်။ မသိလျင် ရွှီးသာရွှီး ဖြီးတာဖြီး။ အဲ.. ရွှီးတာနဲ့ ဖြီးတာ မတူဗူးဗျ..။ ဟားဗတ် တက္ကသိုလ်ထုတ် BCKG မြန်တျန့် အဘိဓါန်မှာ ဒီလိုဆိုဒယ်..။ ရွှီးခြင်း = မသိဘဲ ပြောသည်။ ဖြီး = အပေါ်ယံ နဲနဲ သိသည်ကို တတ်ယောင်ကားလုပ်သည်။ သဂျီးမာမွတ်ခိုမ် ဝိပဿနာအကြောင်း ပြောတာမျိုးဆို ရွှီးကြူပေါ့၊ အင်တာနက်မှာ သူ ဂူဂဲလ်လုပ်ရှာ ဖြတ်ညှပ်ကတ်ပြီး အထောက်အထားနဲ့ ဆွေးနွေးတာမျိုးကြတော့ ဖြီးကြူ..။ လူပေါ်လူဇော် လုပ်စားသူမှာ အဲဒီ အရည်အချင်း ရှိတယ်ဆို ဗူငြင်းမဲ။ စိုင်ကော်လို့ ခြုံပေါ်ရောက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မတရား အနိုင်ကျင့်ပြီး အထက်ရောက်သွားလျင် အဲဒီကြူသုံး ဟောက်စား လုပ်ပေဒေါ့။ တခုတော့ရှိလယ် အဲဒါ သက်သက်သုံးမည်ဆို တဖက်လူသည် နုံအသူ၊ အကြောက်တရား ကြီးစိုးသူ၊ စွန့်စားမှု မပြုရဲသူများ ဖြစ်ရမယ်။ အဲလို မဟုတ်လျင် ကိုယ့်မှာ ရိုက်ဖို့ တုတ် တချောင်းတော့လို၏။
ဟီးကြူ.. လိုအပ်တဲ့အခါ မျက်နှာချိုသွေးပါ၊ ရူးချင်ယောင်ဆောင်ပါ။ ဟုတ်တယ်နော် တချိန်ချိန်မှာ အမှားတော့ လုပ်မိမှာပဲ.. အဲဒီအခါ ဟီး ဟီး ဟီးနဲ့ သွားဂျီးဖြဲ ပြဖို့လိုဒယ်။ မှားလဲမှားသေး မျက်နှာသေကြီးနဲ့ဆို ခွေးဘူက လွှတ်မဲ။ ကိုယ့်အတွက် ကျန်မည်ဆို ဘယ်သူ့မဆို ဟီးပြတတ်ပါ၊ အောက်ကျို့လို့ လူမသေ၊ အပြောတတ်လျင် လိင်ဗျံအလကားစီးရ၊ သနားလို့ အဝှာပေးကိုင်တာ ဟိုဒင်း ရန်မလျှာနဲ့ (အနည်းဆုံးတော့ ကိုင်ခွင့်ရအိ) စဒါဒွေ အလဂါးမှုတ်..။
ငြီးကြူ.. အခွင့်ကြုံလျင် ငြီးတတ်ရမည်။ ငြီးကြွားလေးကြွားတာ ဗျားတို့ မကြာမကြာ ကြားဖူးမဲ။ ဓာတ်ဆီဖိုးက ဈေးကြီးလိုက်တာ သိလား ကိုယ်စီးနေတဲ့ကားက ဖိုးဝှီးဒရိုက်ဗ်ဆိုတော့..။ သားတော်မောင် တက်နေတဲ့ အင်တာနေရှင်နယ်စကူးလ် ကျောင်းလခ တက်ပြန်ပြီ ဒေါ်လာ နှစ်သောင်းတဲ့ ဟူး..။ အလုပ်တွေများလိုက်တာ ရီပို့တွေ လုပ်နေရတယ်..။ ကိုယ်ဘာကောင်ဆိုတာ ပြသလို အားနည်းချက် ရှိလျင်လဲ ဘာကြောင့်ဆိုတာ ကြို ကာပြီးသားဖြစ်တယ်။ ဥမပါ ဂေဇက်သဂျီးဇုတ် အယာတိုလာ မာမွတ်ခိုမ် ဂဇက်ရွာအတွက် ဘာကြေး ညာကြေး ကုန်ဂျောင်း ငြီးတာမိုးပေါ့..။ သူ့ဆိုက်က အသုံးမကျ နှေးပါတယ် ဘူမှ အပြစ်မတင်ရဲဒေါ့ဗူး..။ တေဒင်းဂျိုး MPT ကိုးနတ်ရှင်ဆီ အဆဲ လမ်းဂျောင်း ပြောင်းသွားဒယ် မဟုတ်လား။ ဆိုက်ကို မွမ်းမံထိန်းသိမ်းမှု မလုပ်ဘဲ ဦးမွတ် သူ့မိန်းမ ဒေါ်ခါလာဂျီးနဲ့ ဖက်အိပ်နေဒါရော အဖြစ်နိုင်ဘူးလား..။ စဉ်းဇားဆြာ..
နောက်ဆုံးက ခွီးကြူ.. သိပ်တွေးမနေနဲ့ ဆဲချဉ်လျင် ဆဲပစ်လိုက်၊ သင့်မသင့် ဘာကြောင့် ညာကြောင့် မလို၊ အခြစ်မှာ အကြောင်းပြချက် မလိုသလို ဆဲခြင်းမှာလဲ လွတ်လပ်စွာ ဆဲပစ်ရမြီ။ ဟေ့ ဦးမာမွတ် ခီဗျားကို ကျုပ် လဗျင်ထွတ်…။ တနည်းအားဖြင့် တက်ကြွဒဲ့ ကြက်ဖ active ပေါ့ဗျာ၊ လောဘကြောင့် ကြီးပွားဒယ်ဆို လူကို ဒေါသသည် မြန်ဆန်သွက်လက်စေတယ်၊ ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ လူရှိန်စေတယ်။ တနေ့ကပဲ ခီဗျားတို့ အရေခွံထူပါတယ်ဆိုဒဲ့ ဦးမာမွတ် ရွာသားတျောက်ကို မှင်နီတား ခွီးလိုက်ပြီ မှုတ်လား။ သူ့နှစ်လုံးပြူးကြီးနဲ့ ထုတ်ပစ်ပြီ။ မှန်တယ် သဂျီး.. နှစ်လုံးပြူးဂျီးကို သဂျော်ဂဒီးအတွက် သီးသန့်ထား သုံးနေတာရပ်တော့။ ရံဖန်ရံခါလဲ ရွာထဲ လှံပြသင့်ပြရမဲ (ကတ္တီပါအိတ်စွပ် သိမ်းထားလို့ပါ။)
ဒါဒွေက ကျုပ်သိထားတဲ့ ကြူဒွေပဲ..။ ဗျားဒို့ဂေါ ဘာကြူတွေ သုံးသလဲ..။ ကြူတခုထဲ သုံးတာရှိသလို ကြူနှစ်ခု သုံးလေးခု စုပေါင်းအခါလည်းရှိမဲ။ သိုးဆောင်းစကားမှာတော့ flexible ဖက်ဆေးဘဲ = တရားသေ ဆုပ်ကိုင် မထားခြင်းနဲ့ တူမည်။ ခုပဲကြည့် အနော် ဖြီးကြူ သုံးမိလိုက်ပီ..။ ဒဂယ်တော့ အွန်လိုင်းအဘိဓာန်တက်ကြည့်ပီး သုံးလိုက်တာဗျ။ ဗျားတို့ နည်းနည်းတော့ ဖြုံသွားဒယ် မဟုတ်လား..။ ငါ ကွ.. မလိင်ဂျေးဗျာ.. လိင်ယဉ်နှစ်ပြစ်..
ဟဲလို ကြူကြူလား ကိုယ်ပါ ခေါင်းမပါဘူး
နာ အကုန် ကြူတတ်တယ်ကွ။
ဦးကြောင် အပိုင်ဆုံး ကြူက
ဒလောက်ကြူတတ်တာတောင် ဒီကြောင်ဂို တစ်ယောက်မှ လက်မခံ.. ကြူပုံကြူနည်းမှားနေလို့ဖြစ်မြီ
သူ က ကြူတာ မဟုတ်။
အာ့ကြောင့် ဘလော့ချည်း ခံရတာ။
ကြောင်ရီးစွံပုံများ ကြောင်ကိုဘလော့သူများ ဂလုဖွဲ့လို့ရဘီ..
၀င် နာယူမှတ်သားသွားပါတယ်ဦးကြောင်…… :D
ကောင်းလိုက်တဲ့ ကြူ တွေပါလား…
ကြောင်ကြီး ကျုပ် စိတ်ဆိုးရင် သုံးတဲ့ ကြူ တစ်ခုရှိသေးတယ်
ည က မှ ပြ မယ်
ချိတ်မချိုးဘို့ အရင် တားတား ကျောထားမယ်နော်.. တားတားက အထု… -ီးကြူ ခြစ်ဖို့ကြိုးကျားနေတယ်.. အထုတော့ ခြစ်တေးဘူး… အတက်ကြီးရာရင် အဲဒီ -ီးကြူခြစ်လာမယ်ထင်ရယ်နော်… တားတားရဲ ရူညားဒွေကျောနေဒေါ့.. ကျောချင်ရာပေါ့…
အဖြေမှန်က လူကြီးဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေခြင်းပါ… ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်တော့… ဟီး…
ဘယ်နာမည် ပြောင်း ရမယ် စင်းစား လိုက်ဦးမဟေ့ အောင်Q ..
အားလုံး ကိုက်နေလို့။ :-)
ဒီတစ်ခါ လူဘ၀ပြောင်းသွားပြီလား ဦးကြောင် …
ကျုပ်​က​ဒေါ လူချိန်​ဒဲ့ ဆဲကြူ ပဲသုံး​နေဒယ်​ ။ အလဂါး​နေယင်း ဟီးပြရဒါဆိတ်​မဘာဘူး
ကြူတယ်… ဆိုတာ.. တဖက်သူက.. အမှန်မဟုတ်ဖူးဆိုတာကိုသိနေတဲ့.. စကားကိုပေးထားတဲ့.. အလင်္ကာပေါ့..။
မုသာဝါဒအရာ၌ အကျိုးစီးပွားပျက်စီးမှ မုသာဝါဒကမ္မပထ မြောက်၏။ အကျိုးစီးပွား မပျက်စီးလျှင် မုသာဝါ ဒကံမျှသာ ဖြစ် သည်။ မုသားစကား ပြောဆိုသော အင်္ဂါ(၄)ပါးရှိ၏။ ၎င်းတို့မှာ-
(၁) မဟုတ်မမှန်သော အကြောင်းဖြစ်ခြင်း၊
(၄) မိမိလှည့်စားသည့် အဓိပ္ပာယ်ကို သူတစ်ပါးနားလည်ခြင်း တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
မုသားပြောဆိုခြင်းကြောင့်ရရှိသော အပြစ်(၉)မျိုးရှိပါသည်။ ၎င်း တို့မှာ-
(၁) ယခုဘ၀၌ စကားပီပီသသ မပြောတတ်ခြင်း။
(၂) သွားများ မညီမညွတ် ရှိခြင်း။
(၃) ခံတွင်း ပါးစပ် ပုပ်ညှီခြင်း။
(၄) ကိုယ်အရေးအသား ပူရှိန်ခြောက်ကပ် စိုစိုဖတ်ဖတ်မရှိခြင်း။
(၅) မျက်စိ-နား စသော ဣနြေ္ဒများ နောက်ကျုကျုရှိခြင်း။
(၆) ပုံဟန်မလှပဲ ဆိုးရွားချွတ်ယွင်း ဖောက်ပြန်ခြင်း။
(၇) သူတစ်ပါးအပေါ်၌ သြဇာမတည်ခြင်း။
(၈) အပြောအဆို နှုတ်လျှာများ ထော်လော်ကြမ်းတမ်းခြင်း။
(၉) စိတ်မတည်ပဲ လျှပ်ပေါ်လော်လီတတ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ကြပါ သည်။
ရွှီးကြူ.. ဖြီးကြူလို့လဲ ခေါ်တယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီလို လုပ်တတ်ဖို့ ပွဲစားမှမဟုတ်တာ။
ဟီးကြူ.. လည်း မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့… သူများကို ဖားတတ်တဲ့မပါလို့…
ငြီးကြူ.. ဒီထဲလည်း မပါပြန်ဘူး ဒီလောက်သုံးနိုင်တဲ့ အနေအထားမှာ မရှိသေးလို့။ ကုန်းရုံးရှာနေလို့ ငြီးဖို့ အချိန်မရှိဖြစ်နေတယ်။
နောက်ဆုံးက ခွီးကြူ.. ဒါကတော့ အလွန်မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ သူများကို အသံမာမာနဲ့တောင်မပြောတာ ဆဲဖို့ဆို ဝေလာဝေးပဲ…
ကဲ ဦးကြောင်… ဒီတော့ မနောအတွက် ဘယ်ထဲပါရမလဲ…
မနောပြောရင် ကျွန်တော့်ကို ဆွဲမထည့်ပါနဲ့… ပွဲစား ကျွန်တော်က တိကျပါတယ်… တပွဲ ဘယ်လောက်စားမယ်ဆို အဲဒါထက် ပိုမစားပါ… ပြီးမှ တောင်းစားတာ…